पार्टी लामो समयपछि एकलय, एकतालमा
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » पार्टी लामो समयपछि एकलय, एकतालमा
एउटा चाहिँ, चितवन महाधिवेशनले दिने सन्देश के हो भनेर सोध्नु भएको छ । अर्को, नेकपा (एमाले) फुट्यो, कमजोर भयो आदि इत्यादि कुरा छन् । तिनीहरु मध्ये एउटा कुरा चाहिँ के हो भने सत्तापक्षमा थियो, सरकारमा थियो एमाले । प्रतिपक्षमा गयो । सत्य कुरा यत्ति हो । शक्तिमा यो एउटा ठूलो शुद्धीकरण हो । सुदृढीकरणको मौका पनि मिलेको छ र पार्टी लामो समयपछि एकलय, एकतालमा अगाडि बढ्ने अहिले अवसर मिलेको छ । कुनै पनि चिजको एउटा मात्रै पाटो हुँदैन । केही मानिसहरु चोइटिए, त्यो एउटा कुरा हो । अरुतिर कति भयो कुन्नी, सञ्चार माध्यममा अकिलति आयो, नेकपा (एमाले) भित्र एउटा शब्द थियो, ल्याङल्याङ कति ? भन्ने शब्द । त्यो ल्याङल्याङ शब्द प्रचलित भएको थियो । ल्याङल्याङ अन्त्य भयो । र, नेकपा (एमाले) को न मतदाता घटेका छन् न केही । अँ, हामीले निर्वाचित गराएका केही मानिसहरु बिग्रिए, केही मानिसहरु भ्रममा परे र पार्टी छोडे । त्यति हो तर त्योभन्दा बढी पार्टी प्रवेश गर्नेहरुको लहर छ । तपाईंहरुले सुन्नु हुन्छ होला कति मान्छेले पार्टी छोडेका थिए? दिनमा कति मान्छे पार्टी प्रवेश गरिराखेका छन् ? एक ठाउँमा प्रवेश गर्दा ९ सय, एक हजार, १२ सय, १५ सय, २ हजार, ३ हजारसम्मका संख्याले प्रवेश गरेका छन् र ४५ सयसम्मकाले एकदिनमा प्रवेश गरिराखेका छन् ।
हामीले राष्ट्रिय निर्वाचनमा पनि, उपनिर्वाचनमा पनि विद्युतीय भोटिङको प्रयोग गरिसकेका हौं । उपचुनावमा कैलालीमा पनि भएको छ र बिना अप्जेक्शन त्यहाँ त्यसको राम्रो प्रयोग देखिएको छ । म यससम्बन्धी विज्ञ होइन । मैले पनि भोट कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हेरेँ । र, त्यो भोटिङ मेसिनका चालक ÷ सञ्चालकहरुले त्यसको ब्रिफिङ गर्नुभयो । भोट कसरी खसाउने भन्नेमा, पार्टीको तर्फबाट त्यसको हेरविचार गर्ने, त्यसको प्रयोग गर्ने, त्यसलाई छोएर भोट हाल्ने, भोट गलत ठाउँमा परेछ भने बदर गरि हेर्ने, फेरि सच्याएर अर्को ठाउँमा गरि हेर्ने आदि कुराहरुको अभ्यास भएको छ ।
अर्को प्रश्न छ, हामीहरु पार्टीमा बस्नुभन्दा पहिले को पूर्व माओवादी थियो ? को पूर्व के थियो ? भन्ने कुरा होला । को हिजो कहाँनिर थियो एउटा कुरा होला । एक ठाउँमा भएपछि हामी फेरि एक ठाउँमा छौं । त्यसकारण यो पक्षको व्यवस्थापन, त्यो पक्षको व्यवस्थापन भन्ने कुरा छैन, हुँदैन । हाम्रो काम नेताहरुको व्यवस्थापनमा अल्झिने होइन, हाम्रो काम देशका जनताका समस्याहरुको समाधान गर्ने, त्यसका निम्ति ध्यान दिने, त्यसका निम्ति अल्झिने हो । अब कुन नेताको व्यवस्थापन के ?अहिलेको व्यवस्थापन भनेको चुनाव लडेर भोट ल्याउनु पर्छ । जुन पदमा भोट ल्याएर जित्छ त्यहीँ हो व्यवस्थापन । ल्याएर जितेन भने नो व्यवस्थापन । त्यसकारण यो पक्षको व्यवस्थापन, उ पक्षको व्यवस्थापन गर्न थाल्यो भने त्यही पार्टीभित्र पक्ष–विपक्षको निरन्तरता अथवा नया ँसिर्जना यस्ता खालका अभ्यासहरु हामी गर्दैनौं । पार्टी एउटा छ, एउटा पार्टी, एउटा नेतृत्व । एउटा केन्द्रीय कमिटी हुन्छ । एउटा स्थायी कमिटी हुन्छ । एउटा सचिवालय हुन्छ । पदाधिकारीहरुको समूह एउटा हुन्छ । यसको पक्षबाट यतिजना, यसको पक्षबाट यतिजना गरेर सचिवालय पनि बन्दैन । स्थायी कमिटी पनि बन्दैन, केन्द्रीय कमिटी पनिबन्दैन । यसको पक्षबाट यतिजना, यसको पक्षबाट यतिजना भयो भने त्यो सधैँ पक्ष भइरहने भयो नि । पार्टी एकजुट त कहिल्यै पनि नहुने भयो । हाम्रो चाहना होइन, जनताको पनि चाहना त्यो होइन । त्यसकारण हाम्रोमा त्यस्तो कुराहरु छैन । हाम्रोमा नेताहरुको व्यवस्थापन मुख्य कुरा होइन र प्रवृत्तिहरु, पक्षहरु कायम राख्ने कुरा होइन । हामी अन्तरघुलित भएर एउटा पार्टी, एउटा संगठनको रुपमा आबद्ध भएर अगाडि बढ्छौं ।
महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि कति खर्च लाग्ला ? त्यो खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
तपाईंले पार्टीभित्रका असन्तुष्टिलाई ल्याङल्याङ भन्नुभयो । फेरि ल्याङल्याङ अर्को जन्मिने हो कि ? फेरि ती कुराहरु जन्मिने हुन् कि भन्ने खतराहरु पनि छ, ती खतराहरु कत्तिको देख्नु भएको छ यहाँले ?
म तपाईंहरुलाई भन्न चाहन्छु, अब ठूलो परिवार भएपछि खानाखर्च नै ठूलो हुन्छ । चामल, दाल, सब्जी नै धेरै लाग्छ । एमाले जस्तो ठूलो पार्टीको महाधिवेशमा मञ्च निर्माण होस् वा सहभागीहरुलाई उद्घाटन कार्यक्रममा ल्याउन यातायात व्यवस्था, प्रतिनिधिहरुका खानेबस्ने व्यवस्था खर्च त लागिहाल्छ । अनुत्पादक हो कि भन्नुभयो, हो, अलिकति अनुत्पादक हुन्छन् कतिपय कुराहरु ।
खर्च त अवश्य लाग्छ नै । तर नेकपा(एमाले) संगठित सदस्यमात्रै ८ लाख ५५ हजार४ सय ५३ सदस्य भएको पार्टीले सानोतिनो खर्च ग¥यो भने कुनै अनौठो मान्नु पर्दैन । किनभने सय ÷सय रुपैया मात्रै उठाउँदा पनि ८ करोड ५५ लाख हुन्छ भने, अर्को कुरा सय रुपैयाका दरले हामीले मागेका पनि छौं । नसक्नेले सय दिन्छ, दिनेले यस्तो बेलामा अलिक बढी पनि दिन्छ । महाधिवेशनमा हुन पनि सक्छ ७÷८ करोड खर्च । यो धेरै आश्चर्यजनक कुरा होइन ।
उम्मेदवारी दिनु, गुट जन्मिनु र प्रतिस्पर्धा गर्नु बेग्लै कुरा हो । महाधिवेशनमा हाम्रो पद्धति के हो भने निर्णय नभएसम्म हामी छलफल गछौं, निर्णय नभएसम्म हामी प्रतिस्पर्धा गर्छाैं । निर्णय भइसकेपछि विचार पनि टुंगो लाग्यो र जिम्मेवारी पनि टुंगो लाग्यो । निर्णय हुनुभन्दा पहिले कसैले दावी गर्न सक्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्,निर्वाचन लड्न सक्छ । निर्वाचित मतदाताको विश्वास जितेर निर्वाचित भएभने जिम्मेवारी पायो, भएन भने पाएन । पाएन भने पनि सिद्धियो, पायो भनेपनि सिद्धियो । त्यसपछि आफ्ना आफ्ना ठाउँका जिम्मेवारी, कामहरु वहन गर्छन । त्यसले गुट जन्मिँदैन । नत्र भने लोकतन्त्र नै भएन, लोकतान्त्रिक अभ्यासले सधैँ गुट मात्रै जन्माइरहने भयो । त्यसकारण गुट त्यसरी जन्मिन्छ भन्ने कुरा होइन ।
नेकपा (एमाले) सँग एउटा स्थायी निर्वाचन आयोग छ, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग । त्यस निर्वाचन आयोगले पार्टीका देशभरीका निर्वाचन आयोगहरु सञ्चालन गर्छ हरेक तहका । उसले निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत आदि तोक्छ । अब उम्मेदवारी क–कसले दिन्छ, कसको उम्मेदवारी प¥यो परेन ? भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले जान्दछ । उम्मेदवारी परेपछि पनि आपसी सल्लाहबाट, सहमति गरेर उम्मेदवारी फिर्ता गरेर एउटा मात्रै बाँकी रह्यो भने निर्विरोध, हुनसक्छ । भएन भने चुनाव हुन्छ । यो निर्वाचन आयोगको विषय हो । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी जस्तै निर्वाचन सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय छुट्टैछ । यस महाधिवेशनमा त्यही निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउँछ । सर्वसम्मत हुन्छ कि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, उसले निष्पक्ष निर्वाचन गराउँछ र परिणाम दिन्छ । सहमतिको परिणाम हुन्छ कि प्रतिस्पर्धाको परिणाम हुन्छ तर निर्वाचन आयोगले दिन्छ । जसलाई हामी सबैले स्वीकार गर्छौंै । त्यसकारण मेरो अलिक बढ्तै रुचि छ कि जस्तो साथीहरुले नठान्नु भए पनि हुन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ, न्यायालयको । पहिलो के स्पष्ट हुनुपर्छ भने नेकपा(एमाले) न्यायालय स्वतन्त्र होस्, निष्पक्ष होस भन्ने चाहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमै लोकतन्त्रको, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एउटा मान्यता छ कि राज्यका तीनवटै अंगहरु स्वतन्त्र छन्, स्वतन्त्र ढंगबाट चल्नु पर्छ–व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका । तिनीहरुले आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्छ । अरु दुईवटा निकाय राजनीतिक निकाय हुन् । संसद पनि राजनीतिक निकाय हो र सरकार पनि राजनीतिक निकाय हो । कार्यपालिका पनि राजनीतिक निकाय हो । न्यायपालिका राजनीतिक निकाय होइन । त्यसकारण कहीँ कतै राजनीतिक निकायहरुमा संविधान, कानूनमिच्ने काम भयो, त्यसको अपव्याख्या गर्ने काम भयो अथवा संवैधानिक वा कानूनी अस्पष्टताका कारणले त्रुटि हुनगयो, अथवा कतै कसैमाथि थिचोमिचो हुन गएर कसैका अधिकारहरु खोसिए भने व्यक्ति वा संस्थाहरु न्यायालय जान्छन् । न्यायलयले निष्पक्ष न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । न्यायको निष्पक्षताका सन्दर्भमा हामी चाहन्छौं कि न्यायालय वास्तवमा नै निष्पक्ष होस् । संविधान र कानून बमोजिम फैसला गरोस् । अन्य कुराहरुको अवाञ्छित प्रयोग न्यायलयमाथि कहीँ कतैबाट किञ्चित नपरोस् । र, अदालत जनताको आस्था, विश्वास, सिंगै देशको आस्था विश्वास, न्यायीक हिसाबले हामी न्याय पाउँछौं भन्ने विश्वास अड्याउने, टिकाउने थलो बनोस् । साझा न्यायिक निरुपणको थलो बनोस्, अदालत संविधानको व्याख्याता बनोस् ।
सबैभन्दा बढी भोट पाएको, सबैभन्दा बढी सिट पाएको वहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई अब निर्वाचनमा, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा हाललाई यसमा भाग लिन नपाउने, सहभागी हुन नपाउने ? जनताले सबैभन्दा ठूलो पार्टी, सबैभन्दा बढी मत, सबैभन्दा बढी सिट दिएर पठाएका छन् । जो सिटिङ प्राइमिनिस्टर छ, उ चाहिँ उम्मेदवार नै हुन नपाउने जस्तो फैसला ! यो न संविधानको अक्षरसँग मिल्छ, न भावनासँग मिल्छ, न लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मिल्छ, न दुनियाँको विश्वको कतैको नजिरसँग मिल्छ वा अभ्याससँग मिल्छ । त्यस्तो कुरा पनि भयो । हामीले त्यो कुरा संविधानसम्मत र न्यायोचित भएन भन्यौं । तर, अदालतको मर्यादाका लागि, अदालतको सम्मानका लागि हामीले त्यसलाई मान्यौं, कार्यान्वयन ग¥यौं । किन यस्तो भएछ ? वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरु भन्नथाल्नु भयो, वारले भन्नथाल्यो, सर्वोच्च अदालतका श्रीमान् न्यायाधीशजीहरुले भन्नथाल्नु भयो । सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरुका भाषण यहाँहरुले सुनिरहनु भएको होला । भ्रष्टाचारका कुरा, लेनदेनका कुरा यहाँहरुले नै सार्वजनिक गरेका कुराहरु छन् । मन्त्रीमा बार्गेनिङ भयो, लेनदेनभयो भनेर…. । (सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राख्नुभएका विचारको सम्पादित अंश ।)